Akụkọ Akpado "Ihe Ọmụma na Ihe Ọmụma" - ULLER
Otu edemede niile Ọzụzụ Entretenimiento Ndị mmadụ Ihe omuma na ihe omuma Ụdị Njem na Ebe
Chọpụta mkpa ọ dị iyiri ugogbe anya maka anwụ!
Ezigbo onye na-eme egwuregwu kwesịrị ịgụnye iko egwuregwu na akụrụngwa ha, ebe ha bụ isi ihe dị mkpa iji chebe anya site na ọkpọ ma ọ bụ radieshon nke anyanwụ. Ma ugogbe anya maka anwụ bụ, n'ime onwe ha, karịa nke ahụ, ejiji, nchekwa na ịrụ ọrụ dị elu. Guo ma chọpụta uru dị n’egwu ugogbe anya maka anwụ!
Choputa ihe iri na amaghi banyere ikuku ikuku!
Windsurfing bụ egwuregwu jupụtara na nzuzo na ọchịchọ ịmata ihe ị ga-ahụ n'anya ịchọpụta. Ọzọ, anyị ga-agwa gị banyere ndị nna ochie nke omume a, banyere ntụpọ ndị ị na-agaghị echefu ma ọ bụrụ na ịchọrọ Windsurfing ... Na ọtụtụ ndị ọzọ!
Uru puru iche nke egwuregwu n'èzí | Oge Mgbapụta
Ọ bụrụ na egwuregwu ahụ na-agbanwe ná ndụ gị ugbu a ma ị kabeghị ya na ndepụta nke omume gị, mmiri nwere ike ịbụ oge kachasị mma iji were ya. Nke a bụ uru nke egwuregwu n'èzí. Echefula ha!
O siri ike ịchọta onye na-anụbeghị banyere Tour de France ma ... I chere na ị ma ihe niile gbasara ihe omuma egwuregwu a? Guo ma chọpụta ihe 10 ị kwesịrị ịma banyere asọmpi a dị egwu, site na nke kachasị mkpa na nke dị mkpa, na akụkọ ihe mere eme kachasị achọ!
Igwe ịgba ịnyịnya ígwè Jikere maka ịgba ịnyịnya ígwè ugwu!
Ọ bụrụ na ị na-eche ịzụrụ iko ịnyịnya ígwè maka ụzọ ọzọ ị ga-aga n'okporo ụzọ ma ọ bụ n'ugwu, anyị ga-agwa gị akụkụ ndị ị kwesịrị iburu n'uche tupu ị gbakwunye ngwaahịa na ụgbọ ibu azụmahịa, yana ihe kpatara anya anya nke Ullerchange ji bụrụ ya mere mara mma nhọrọ.
Ndị egwuregwu Spen 7 bụ ndị gbadarala n'akụkọ ihe mere eme
N’enweghi mgbagha, ewepụtara mba anyị ka ike ụwa n’uwa egwuregwu. Ọkachamara egwuregwu ọkachamara nke Spain abụrụla akara mmụta na ọzụzụ dị iche iche, ebe ndị na-eme egwuregwu na Spain nweela nnukwu mmeri na-enweghị atụ. Site na ọgba tum tum, ịgba ígwè, mgbako, site na ịrị ugwu, ịgba ọsọ na ịgba ọsọ. Akụkọ ndị na-akpali akpali ma na-akpali akpali sitere na ndị Spain bụ ndị na-ekwenyeghị na ha ma banyela n'akụkọ ihe mere eme dị ka ndị kasị mma na Spain. N'ebe a, anyị ga-ahapụrụ gị ndepụta ndị egwuregwu Spanish bụ ndị gbadara n'akụkọ ihe mere eme maka ndekọ ha na-enweghị atụ na agụụ maka egwuregwu!
Chọpụta uru ise ịgba ịnyịnya ígwè bara!
Gba ịnyịnya ígwè bụ ihe ịtụnanya n’enweghị mgbagha ọ bụla. Naanị ka ikuku na-efe na ihu gị mgbe ị na-agafe ụfọdụ n'ime ebe mara mma na Spain ma ọ bụ ụwa ... Nọgide na-agụ ma chọpụta ihe bụ isi uru 5 ị na-enweta mgbe ịmalitere n'ụwa ịgba ígwè!
Ihe kachasị ọhụrụ na enyo anya Discover ọhụrụ Uller Snowdirft!
Nchịkọta anyị nke ULLER SNOWDRIFT® ugogbe anya-elu A na-eji teknụzụ kachasị elu na mbara igwe eme ụwa! MHa gụnyere sistemụ mgbanwe igwe magnet. You maara teknụzụ anyị? Chọpụta ha ebe a!
Site na Uller® anyị chọrọ ịkọwara gị ihe ọ pụtara kpọmkwem na ugogbe anya maka anwụ anyị na-arụ ọrụ yana anyị kọwakwara uru dị n'ụdị a maka ugogbe anya anwụ nwere na ihe kpatara ị ga-eji họrọ ha dịka njirimara ha si dị. Anọla na obi abụọ, lee, anyị na-aza ajụjụ a na-ajụkarị maka ugogbe anya maka anwụ.
Site na Uller® anyị chọrọ ịkụziri gị mkpa ọ dị maka ihe mkpuchi ski na lenses photochromic ma a bịa n'ichebe anya gị mgbe ị na-eme egwuregwu sista, snowboarding, freeriding ma ọ bụ egwuregwu egwuregwu ọ bụla. Chọpụta uru nke ugogbe anya na anya anya nke fotochromic!
Site na Uller® Anyị akwadebela ndụmọdụ ndị a maka igbochi ihe egwu ọ bụla n'ugwu n'ihi na anyị chọrọ ka ndị na-agba anyị na ndị egwuregwu anyị ga-anọgide na-anụ ụtọ ihe omume kachasị amasị ha ma na-egbochi ụdị ihe egwu ọ bụla. Soro ntuziaka anyị ma kwadebe n'ụzọ zuru oke maka njem gị n'ugwu!
Ntị ndị na-eme egwuregwu! Na ihe omume egwuregwu ị na-eche ha ugbua nwere ụbọchị emume ha maka 2021. catch jidere ha? Ee, otu afọ jupụtara na egwuregwu na ihe egwu na-abịa! Lego anya na ndepụta nke ihe ndị guzobegoro usoro iwu ọhụrụ ha na ụbọchị na kalenda.
Ski ma ọ bụ snowboarding abụghị egwuregwu. Ndị a bụ egwuregwu dị oke egwu nke chọrọ nkwadebe kachasị mma na ọnọdụ. Ihe kachasị mkpa bụ na gụnyere nke kacha mma mma na akụrụngwa ị na-eyi tinyere ụfọdụ magnetik iko.
Fans na-akwadebe ha ugogbe anya-igwe to zuru enwe oge ski Pịa ebe a wee chọpụta nke bụ egwu kachasị ịtụnanya na Europe! You maraworị onye n’ime ha kachasị amasị gị?
Ndi okacha amara nke mbu na ndi mbido kwesiri ikpuchi anya ha site na ugegbe enwu O doro anya na ọ bụ oge iji mee ka nke gị maka oge a. Nọgide na-agụ ma chọpụta uru dị na iji nke kachasị mma ski enyo anya 20-21!
Meelarị n'aka nke ga-abụ ebe kachasị amasị gị? Ma obu gini mere na ina anaghi anwa ndi a nile anyi kwadoro? Wepu ihe obula ma mee ka njem gi gaa snow. Ọtụtụ puku ihe egwu, jumps, pirouettes na ọdịda na-echere gị na ọdụ dị iche iche nke Peninsula. Echefukwala iweta ihe mkpuchi gị!
Kwadebe ugogbe snow gị Oge a ga-emepe ọzọ!
Na oge ski 2020/2021 na-achọ ibido! Ebe a na-egwu mmiri na-emepụta usoro iwu akọwapụtara maka izu iji nwee ike imeghe n'enweghị nsogbu ... na nke gị snow ugogbe anya ha ga - abụ ihe dị mkpa iji belata ihe ize ndụ nke ibute ọrịa n’afọ a.
Egwuregwu ski ma ọ bụ enyo ebe m ga-amalite?
Ọ bụrụ n ’ị ka na - eche echiche ibido n’egwuregwu oyi, oge agabigaghị inyocha ihe ị chọrọ mgbe ị na - ahọrọ ebe ị ga - ebido, họrọ ụdị nke ga - adịrị gị mma ma ghọta ma ị ga - azụta nke mbụ. Iko ugo ma ọ bụ gị snow ugogbe anya.Chọpụta ntakịrị ihe banyere egwuregwu abụọ ebe a!